Fizarana ao Ubunlog | Ubunlog
Ny anaran'ny bilaogy dia avy amin'ny firaisan'ny teny hoe Ubuntu + Blog, noho izany ao amin'ity bilaogy ity no ahitanao ireo karazam-baovao rehetra momba an'i Ubuntu. Hahita programa, fampianarana, fampahalalana momba ny fitaovana ianao, ary maro hafa. Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy amin'ny bilaogy ankehitriny, dia hahita ny vaovao miavaka indrindra momba an'i Ubuntu sy Canonical ihany koa ianao.
Ary tsy izany ihany. Na dia ny lohahevitr'ity bilaogy ity aza dia Ubuntu sy izay rehetra mifandraika amin'ity rafitra fiasa ity, dia hahita vaovao momba ny fizarana Linux hafa ihany koa ianao, na mifototra amin'ny Ubuntu / Debian na tsia. Ary ao amin'ny sehatry ny vaovao ihany koa no amoahanay, ankoatry ny zavatra hafa, ny zavatra ho avy, ny dinidinika amin'ireo olona manan-danja eo amin'ny tontolon'ny Linux na ny fizotry ny fizotran'ny fampandrosoana ny kernel Linux.
Raha fintinina, ao Ubunlog dia hahita fampahalalana isan-karazany momba ny tontolon'ny Linux iray manontolo ianao, na dia ny ho loha laharana aza dia ny lahatsoratra momba ny Ubuntu, ny tsiro sy ny fizarana ofisialy miorina amin'ny rindrambaiko novolavolain'i Canonical. Etsy ambany, azonao jerena ireo fizarana izay atrehinay ary ny an'ny anay ekipa fanonta havaozina isan'andro.
Fitsinjarana miorina amin'ny Ubuntu